Maxkamad ku taala Nairobi oo Muwaadin Soomaali ah ku eedeesay inuu weerar ku qaaday siyaasi Kenyaan ah - Latest News Updates
Maxkamad ku taala Nairobi oo Muwaadin Soomaali ah ku eedeesay inuu weerar ku qaaday siyaasi Kenyaan ah
Maxkamad ku taal Nairobi ayaa ogaatay in muwaadin Soomaali ah oo ku eedeeyay sarkaal Kenyaan ah oo weerar ah inuu kiis ka jawaabo. Garsoore Eunice Kimaiyo oo fadhiya Maxkamadda Sharciga ee Makadara shalay ayaa qirtay in Jamal Mohammed uu leeyahay kiis uu kaga jawaabo isagoo keenaya waxyeelo daran.
Isla mar ahaantaa Kimaiyo wuxuu Jamaal ka aqbalay eedeeymaha ah inuu si sharci daro ah dalka uga yimid, sababo la xiriira in dacwad-ku qaadiddu ay ku guul darreysatay inay caddayn ku filan maxkamadda. Xeer-ilaalinta ayaa loogu yeeray shan markhaati oo muhiim ah oo ka markhaati furay kahor xiritaanka kiiskooda, labadaba xeer ilaalinta iyo difaaca labadaba waxay soo bandhigeen soo gudbinta afka.
Jamaal waxa uu maxkamadda ka codsaday in ay ka baxaan eedeeymaha sheeganaya in eedaysanaha Hussein Mohammed uusan soo saarin warbixinta X-RAY maxkamad taasoo loo isticmaali doono caddayn. Eedeeymaha ayaa sheegay in markhaatiyadii Hussein ay bixiyeen macluumaad iska hor imaad ah maxkamad ku saabsan dhacdada.
Waxa uu sheegay in baarayaashu aysan sameynin baaritaan aqoonsi ka dib markii la xiray Jamaal Maxamed. Hussein Mohammed oo ka markhaati furay kiiska ayaa sheegay in Jamal uu isku dayay inuu dilo 17-kii September ee Eastleigh waddada 7aad ee Kamukunji. Waxa uu sheegay in Jamal uu adeegsaday kabaha oo uu ku sii jeeday meeshii uu ku dhacay.
Kadib eedaysanaha ayaa ka saaray mindi waxana uu ku dhuftay qoorta. “Laba maalmood ka dib markii uu dhacey eedeeysanuhu wuxuu iigu yeedhay oo wuxuu igu yidhi inuu doonayo inuu raali galiyo wixii uu igu sameeyay,” ayuu yidhi Xuseen.
Hussein ayaa maxkamad u sheegtay in Jamaal uu kufsaday isaga sababtoo ah wuxuu doonayay in la bixiyo Sh337,000 kharashkii uu ku kacay ka dib markii ay iibiyeen makiinad ay wada iibsadeen oo ay kala qaybsadeen faa’iidada. Waxa kale oo uu maxkamadda u sheegay in loo soo bandhigay Jamaal walaalkiis iyo inuusan hore u aqoonin.